Fialam-boly sy fialam-boly ho an'ny vehivavy - ahoana no hahitana fialamboly ho anao?
Fialam-boly ho an'ny vehivavy - TOP ny fialam-boly malaza indrindra amin'ny vehivavy
"Ny atao amin'ny fahafinaretana dia tsara atao," hoy ny hendry iray. Mifandray mivantana amin'ny fialamboly izany. Fianakaviana izay afaka mitondra fihetseham-po tsara, na dia tsy manana tombony ara-bola aza, ary matetika mitaky fandaniana. Na dia izany aza, mitranga amin'ny fotoana, ny fialam-boly ho an'ny vehivavy dia lasa loharanom-bola.
Ahoana ny fisafidianana fialamboly?
Eo amin'ny fiainantsika dia misy safidy fialamboly marobe, fa tsy ny olon-drehetra ihany no ampy, ary misy hatrany ireo izay manana karazana fialamboly vaovao ho an'ny vehivavy. Maro ireo safidy, mety hisy fialamboly ho an'ny vehivavy sasany tsy amin'ny fanandramana voalohany, fa raha misy faniriana, dia azo antoka fa hiseho sy hampifaly izany. Inona no afaka manampy amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fialam-boly fidinao, andeha isika hiezaka handinika ny fomba sasany hanaovana izany:
Andao hiverina any amin'ny fahazazana. Ho fahatsiarovana ireo vehivavy maro, ny fahatsiarovana ny renibeny, ny renim-pianakaviana, ny nenitoany na ny namanao iray sisa dia nijanona, izay namorona am-pihetseham-po tamin'ny zava-mahatalanjona mahatalanjona, ohatra, sombin-doko marevaka, tehina matevina na kônkely, Raha toa ka toa fahagagana izany, dia afaka mianatra mamorona fahagagana amin'ny tananao ianao amin'ny taonan'ny taonan'ny fahatanorana.
Ao amin'ny fiainana maoderina dia tsy ampy ny hetsika, ary mipetraka miaraka amin'ny fanjaitra mitongilana sy ny ody fiara tsy manampy izany, amin'ity toe-javatra ity, fanatanjahan-tena, fety, dihy, yoga ary ireo karazana mozika hafa dia mety ho karazana fialamboly tsara ho an'ny vehivavy.
Ho an'ireo tia fianarana ny tsy fantatra dia ho tonga amin'ny fialam-boly mahaliana sy fialam-boly, toy ny astrolojia, esotericism, palmistry. Afaka miditra lalina amin'ny tsiambaratelon'ny fahatsiarovan-tena izy ireo, miezaka mamolavola ny nofy, ny eritreritra, ny mianatra momba ny lasa sy ny ho avy.
Tsy misy fotoana fanampiny, dia afaka mifidy fialam-boly mahasoa toy ny mahandro, manjaitra, savony, famolavolana.
Ho an'ny mpankafy ny zavakanto dia azonao atao ny miezaka manao sary, manoratra fitaovana, manoratra poezia, tantara, hira ary endrika hafa amin'ny famoronana
Ny fialam-boly ho an'ny vehivavy dia azo zaraina amin'ny fomba nentim-paharazana, izay nandritry ny taonjato maro teo amin'ny fiainantsika. Voalohany indrindra, dia asa tanana, fikarakarana, fambolena, zaridaina, astrolojia, famakiana boky sy fanangonana. Ary tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fialam-boly malaza dia nameno karazana karazana, ka na ny anarana aza tsy mazava foana:
amin'ny asa-tanana - frivolite ( milantolondo fitaratra), mitongilana amin'ny gorodona, kofehy mofomamy;
ao amin'ny sakafo - fanangonana fofona, famafazana legioma, fehezam-boninkazo voankazo;
zaridaina - zaridaina mini-gardens, zaridaina balkon, singa avy amin'ny zavamaniry maina;
fanatanjahantena - aqua aerobics , bodyflex, dité-plastika, dihy oriental;
fialam-boly mahatalanjona - manintona amin'ny fasika sy sira, sary hosodoko, famokarana akora;
tsaina - famakiana haingana, fisainana sy famoronana piozila, piozila.
Ny hafanam-po ho an'ny fahasalamana ara-pahasalamana dia manjary maivana. Ny fanatanjahan-tena sy ny fialam-boly dia tafakambana ho iray monja, indrindra rehefa mieritreritra fa noho izany dia nisy ny fahafahana maro. Tena tsara raha afaka mitsidika toeram-panatanjahan-tena sy fampiharana ara-panatanjahantena ianao eo ambany fitarihan'ny matihanina. Saingy, ankehitriny dia afaka mitaky vola be izy fa tsy ny tsirairay no afaka mandoa izany. Misy ny vidiny kokoa, fa tsy fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena sy mahaliana. Afaka mandeha an-tongotra sy bisikileta, milomano sy skateboarding, yoga homena, pilates.
Fianakaviana - sary
Ny fampivoarana ny teknolojia dizitaly dia nahatonga ny fakana sary amin'ny pandemic. Ny olona sasany dia tsy mieritreritra ny fiainana afa-tsy ny tatitra an-tsoratra antsipiriany momba ny andro niainany. Ary mbola tsy maro ireo olona izay tsy dia naka sary fotsiny ny sary, fa ny fidirana amin'ny hobbies mahaliana ary ny zavakanto. Mahazo fitaovana matihanina izy ireo, mandinika ny mety ho azy, mitady fomba fijery mahaliana, fomba tsy mahazatra amin'ny fanodinana sary ary mahazo sary tsy dia mahafa-po, fa ny zavakanto.
Ny fitiavana dia lavitra ny olon-drehetra. Ny olon-drehetra dia samy manana ny safidiny sy ny fahafahana mandeha. Ny fizahan-tany sy ny fitsangatsanganana angamba no fialamboly sy fialam-boly malaza indrindra ho an'ny vehivavy. Ankehitriny dia manana fahafahana mihetsika manerana an'izao tontolo izao malalaka isika. Izany dia atao na dia amin'ny fisotroan-dronono aza, mitantana ny fanavotana ny ampahany amin'ny fisotroan-dronono, ary avy eo mahita trano fialamboly mora ary mifankahalala amin'ireo firenena izay mbola tsy misy.
Ary ao amin'ny firenenao dia misy toerana mahafinaritra izay mendrika ny hitsidika sy hitahiry ny fahatsiarovana sy ny sary. Na dia eo akaikin'ny trano aza ianao dia afaka mahita fitsinjaram-bola mety, mandehandeha any amin'ny faritra malaza. Maro ireo orinasa mpanao dia lavitra no manome faran'ny herinandro mahafinaritra, toerana tsy mahazatra na tsy hay hadinoina. Tsy dia malaza loatra ny fanatobiana amin'ny lay sy ny afo. Ankehitriny, noho izany dia misy fitaovana izay mamorona fampiononana lehibe indrindra amin'ny toe-javatra rehetra
Hobby - famakiana boky
Tsarovy ireo fotoana izay noheverina ho firenena mamaky teny be indrindra, rehefa nalaina ny boky sy ny gazety tamin'ny alina ary novakiana tany amin'ny lavaka. Na dia mamaky aza anefa ny famakiana azy ankehitriny, dia lasa liana amin'ny fialam-boly mahaliana sy fialam-boly mahaliana. Noho ny Internet dia nisy safidy lehibe kokoa navoakan'ny boky ho an'ny kilasy, vahiny, malaza, ary ny siansa. Mora kokoa ny mamaky boky amin'ny fiteny vahiny, na dia tsy dia ambony aza ny haavony. Azonao atao foana ny mampiasa mpandika teny sy diksionera iray. Fialam-boly toy izany ho an'ny vehivavy koa dia mety ho ilaina amin'ny fianarana fiteny vahiny.
Ny fahafahana tsy manam-paharoa hahatsapa ny tenany amin'ny fahafinaretana dia manome asa tanana. Ary rehefa misy safidy, inona no fialam-boly azo atao, dia mendrika ny miezaka ny hisafidy iray amin'ny karazana fanjaitra maro. Azonao atao ny mianatra izany amin'ny sehatra tena izy sy virtoaly, ary afaka miankina amin'ny lesona video, fampiofanana sary, famaritana amin'ny antsipiriany momba ny vokatra manokana.
Ny fitaovana ilaina dia ahafahanao mamonjy vola. Atero ny gara miaraka amin'ny zavatra voatanisa, mifatotra, manolotra ny fanomezam-pahasoavanao manokana, mampiasa menaka voajanahary, savony, shampoo, natao tsy miankina. Amin'ny fahazoana fahaiza-manao sy traikefa, ity fialamboly ity dia afaka mitondra fidiram-bola fanampiny ary hahafahanao manao ny fialam-boly tianao indrindra toy ny asa tianao indrindra.
Hobby - dihy
Raha mandinika ny safidy hobin-kafetsena ianao, dia ny dihy dia tonga lafatra amin'ny fomba mahasoa, tsara tarehy sy mavitrika. Ny fahasarotana dia eo amin'ny safidy. Ny tena mahasoa ny vehivavy dia dihy oriental. Ny fiantraikan'ny fihetsik'izy ireo dia misy fiantraikany tsara eo amin'ny taovan'ny vehivavy, ny fivoahan'ny fihetsiketsehana dia manasitrana ny fahasitranana, ary ny fahasamihafana ara-batana dia manome ny vehivavy. Aza mivoaka amin'ny lamaody maoderina mandihy, latina latina. Nisy dihy izay tsy tian'ny olon-drehetra, ohatra, sarotra, tapaka, jazz-fan, saingy mahazo mpankafy izy ireo.
Hobby - fofona
Ny fientanam-behivavy amin'ny fikarakarana dia heverina ho fitsipika, na dia tsy ny vehivavy rehetra manomana faniriana sy mametraka ny fanahiny. Fialam-boly toy izany no mahatonga ny fiainan'ny fianakaviana manontolo mahavariana, feno fialan-tsasatra, fitsangatsanganana kisary ary fanandramana matevina. Ny fahaiza-manao azonao dia afaka mitombo amin'ny fomba hahazoam-bola, ary indraindray mba hamoronana ny orinasanao manokana. Ary tsy voatery ho izany no ho fisokafan'ny trano fisakafoanana, ny fampiasam-bola azo atao sy ny bilaoginy manokana, ny fananganana ny fomba amam-panao voalohany, ireo horonan-tsary ao amin'ireto fitaovana ireto, ny fampiofanana ny sakafo hafa.
Fitaka ho an'ny esoterika
Ao amin'ny fomba samihafa ny esotericism. Olona iray no mijery azy hamaly valiny amin'ny fanontaniana, ho an'ny olona iray izay lasa loharanom-pamonjena ao anatin'ny toe-javatra sarotra, ny hafa dia ankafizin'ny fialam-boly tsy mahazatra. Ny mahavariana ny fahalalan'ny tena sy ny fahalalan'ny vehivavy momba ny misterin'ny fahatsiarovan-tena sy ny tsy mahazatra dia tsy mahagaga. Ny psikology vavy dia tompon'andraikitra amin'ny fihetseham-po, raha oharina amin'ny fahitan'ny lehilahy manavaka ny tontolo. Hatramin'ny fahiny, ny vehivavy dia mpitarika, mpamosavy, mpanasitrana, afaka mahita ny tsy hita, mahafantatra ny tsy fantatra sy mialoha ny hoavy.
Hobby - Fambolena fambolena
Ny fialamboly tranainy fahiny, fa tena mahafinaritra dia ny fambolena fambolena. Ny taranaka zokiny dia mahatsiaro ny fotoana nodiavin'ny jerany amin'ny varavarankely ny filistinisma, saingy maro ireo varavarankely tahaka ny zaridaina eo anoloana miaraka amina loko marevaka misy loko isan-karazany. Ny fambolena voninkazo malaza sy ny fikarohana voninkazo tsy mahazatra dia mahasarika vehivavy. Amin'izao fotoana izao, misy fahafahana fanampiny hahazoana voa sy tsimokaretina zavamaniry hafakely miaraka amin'ny mpitarika ho an'ny fambolena azy. Izany dia mameno ny andian-draharahan'ny mpirahalahy voninkazo, ary hita indray ho fialamboly lamaody ho an'ny vehivavy izany.
Vehivavy vitsivitsy izay tsy nanana traikefa tamin'ny fanangonana nandritra ny fahazazany. Sangisangy vita amin'ny vatomamy, sora-baventy, saribakoly, kilalaon-java-manjavozavo, ary zavatra hafa manan-danja sy sarobidy. Ny ampahany betsaka amin'ireo tahiry ireo rehefa mihalehibe izy ireo. Ny hafa, rehefa nanontaniana ny fomba hahitana fialam-boly ho an'ny tiany, dia tsarovy ny soatoavin'ny ankizy mampihetsi-po. Ary raha mbola voatahiry any amin'ny faritry ny tranon'ireo ray aman-dreniny izy ireo, eny an-tokotanin'ny trano fialantsasatra, dia mety ho lasa toerana fanombohana ny famoriam-bola izy ireo, izay efa misy ireo sarobidy efa nisy nandritra ny taona maromaro.
Toe-tsaina ara-tsaina - soritr'aretina
Inona ny zanak'olombelona olombelona ary inona no maha-identity?
Zentangle - inona izany, inona no tsy mampitovy azy?
Inona no atao hoe taboo ary inona no dikan'ny taboo?
Khrenovina avy amin'ny voatabiha sy ny soavaly amin'ny akoho
Famolavolana rindrina amin'ny gitara
Syndrome tanana sy tongotra
Cinquefoil fotsy - fifanoherana
23 mariho fa mpampianatra ny sipanao
Manao akanjo lava
Kefalogematoma amin'ny zaza vao teraka
Marion Cotillard dia nahagaga ny mpankafy tamin'ny tsy fahita firy: ny molotra mihamahantra sy ny fahatsapana tafahoatra
Ahoana no fomba famolavolana voaloboka voaloboka amin'ny lohataona?
Roentgenoscopy amin'ny vavony
Kitapo iray ho an'ny antontan-taratasy - inona moa izy ireo ary ahoana no fomba hifidianana ny kitapom-bolan'ny vehivavy?